Rastrabani.com | राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलले टुंग्याए उम्मेदवार, कुन दलका को-को ? - Rastrabani.com राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलले टुंग्याए उम्मेदवार, कुन दलका को-को ? - Rastrabani.com
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलले टुंग्याए उम्मेदवार, कुन दलका को-को ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनका प्रबुद्ध व्यक्तित्व राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने आशय संविधानमा छ। तर, एमाले, माओवादी र कांग्रेसमा राष्ट्रियसभामा जाने मानिस प्रबुद्ध र राष्ट्रलाई योगदान दिएका राम्रा व्यक्तिभन्दा राजनीतिलाई आधार बनाएर छनोट गरेका छन्।
प्रदेश २ मा पाँच सिट आफूलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका राजपा फोरम अन्ततः चार सिटमै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न राजी भएका छन्। आठ सिटमा कांग्रेसले दुई सिट आफूले लिएर चार सिट दुई दललाई दिने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। अब कांग्रेस, राजपा र फोरमले दुई दुई सिट पाउनेछन् भने बाँकी दुई सिट वाम गठबन्धनले पाउने निश्चित छ।मंगलबार दिउँसो राजपा फोरमले दुई पटक एमालेसँग छलफल गरे पनि सहमति हुन सकेन। अाजकाे अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
राप्रपा तालमेलबारे वाम गठबन्धन र कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफलमा जुटेको छ। राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको राप्रपाले चुनावी तालमेलबारे वार्ता गर्न सुशील श्रेष्ठ, विक्रमबहादुर थापा, कुन्तीकुमारी शाही र ऋचा भट्ट जोशी सदस्य रहेको समिति बनाएको छ। मंगलबार दुवै दलका नेतासँग अनौपचारिक छलफल भए पनि ठोस निर्णयमा भने पुगिनसकेको राप्रपा नेत्री शाहीले जानकारी दिइन्।